Fananganana indostria: hapetraka ny lalàna hisarihana ny fampiasam-bola | NewsMada
Fananganana indostria: hapetraka ny lalàna hisarihana ny fampiasam-bola
« Niezaka hatrany ny fitondrana nanomboka ny taona 2014 nampahafantatra ny toerana misy an’i Madagasikara, tamin’ny fandraisana anjara tamin’ny fivoriana iraisam-pirenena maro, sy fihaonana any amin’ny firenen-kafa. Nahitam-bokatra izany izao, nitombo ny isan’ny indostria », hoy ny minisitra Chabani Nourdine, omaly, tao amin’ny minisitera.
Nanomboka ny 2014 ka hatramin’izao, mitohy ny fampiasam-bola avy any ivelany sy ny asa ataon’ny mpandraharaha eto an-toerana, amin’ny fananganana orinasa. 268 ny isan’ny indostria tafatsangana manerana ny Nosy, any amin’ny sehatry ny indostrian’ny fambolena, fanaovan-damba, faritra afakaba. 163 amin’ireo, eto amin’ny faritra Analamanga, ka ny 55 mahakasika ny indostrian’ny fambolena. “Mbola tsy ampy anefa ireo, indrindra ho an’ny fampandrosoana any ambanivohitra, antony ametrahana lalàna vaovao mifehy ny tontolon’ny indostria. 57 taona eto Madagasikara, tsy nisy izany lalàna manokana ho an’ny indostria izany”, hoy ny minisitra Chabani Nourdine. “Antoka lehibe miaro ny fampiasam-bola eto Madagasikara ny fisian’io lalàna io”, hoy ihany ny minisitra.
Eo am-pamolavolana izany lalàna izany izao ny minisitera, mijery izay sakana rehetra mampihemotra ny mpampiasa vola, anisan’izany ny fahalafosan’ny angovo eto amintsika. Zahana ihany koa izay fomba tsy hampiovaova ireo karazan-ketra na haba alaina amin’ireo orinasa ireo. Haroso any amin’ny filankevitry ny governemanta sy minisitra izany lalàna izany, ary hatolotra any amin’ny Antenimiera sy ny Loholona ho fisarihana, indrindra ho fiarovana ny fampiasam-bola eto an-toerana. Tokony tsy atao ambanin-javatra ao anatin’izany lalàna mifehy ny indostria izany momba ny karaman’ny mpiasa.
Asa anarivony maro nomen’ireo indostria vao niforona ireo. Ny orinasa afakaba eto Analamanga, nanome asa mivantana 35.000, ankoatra ireo mifandray aminy, toy ny fitaterana, famatsiana akora sy solika, sns. Any Vakinankaratra indray, nahitana fampiasam-bola 35 tapitrisa dolara eo amin’ny indostrian’ny fambolena. Any Toamasina, ohatra, misy ilay orinasa Natema, efa nampiasa vola 20 tapitrisa dolara, mbola hanavao izay hataony amin’ny fampiasam-bola fanampiny 15 tapitrisa dolara. “Mila hampitomboana hatrany io sehatry ny indostrian’ny fambolena io, ho fampiroboroboana ny any ambanivohitra”, hoy ny minisitra Chabani Nourdine.